पित्तको पत्थरी कस्ता मानिसलाई बढी हुन्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
पित्तको पत्थरी कस्ता मानिसलाई बढी हुन्छ?
बुधबार, असार १८, २०७६, ०९:०५:००
प्रश्न : पित्तको पत्थरी कस्ता मानिसलाई बढी हुन्छ? यसबाट जोगिन के गर्ने? - के
डा सुमन श्रेष्ठको उत्तर :
पित्तको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संसारभर सबै भेगका मानिसमा पत्थरीको समस्या देखिँदैन। पञ्जाब, पाकिस्तान, नेपाल, भारतको पन्जाब, बिहार, उत्तरप्रदेश, मेघालय, सिलोन, बंगलादेश लगायतका भेगमा मात्रै पित्तको पत्थरीको समस्या बढी देखिन्छ। संसारका अरु भागमा पनि समस्या नभएको त होइन। तर यस भेगको तुलनामा कम समस्या छ। उदाहरणका लागि भारतको दक्षिणी भागमा पित्तको पत्थरीको समस्या धेरै छैन। यी भेगको हावापानी, खानपान, मसला लगायत कारणले पित्तको पत्थरीको समस्या धेरै छ।